Buugaagta Dhalashada - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
U dabbaaldeg maalinta dhalashada ilmahaaga adoo siinaya hadiyadda akhriska. Ku darso waxtar waara, magaca ilmahaaga, maktabadda dugsigeenna.
Ugu deeqo $ 15 cunug kasta barnaamijka Buugaagta Dhalashada. Inta lagu jiro bisha dhalashada ilmahaaga, waxay booqan doonaan Dekedda si ay uga xushaan xulashada buugaag horay loo iibsaday. Buugaagtani waa kuwo aad loogu taliyay waxayna yihiin cinwaano maktabaddeenna looga baahan yahay. Buug-gacmeed uu saxeexay ilmahaagu ayaa lagu dhejin doonaa daboolka hore ee gudaha si loo calaamadiyo tabaruca ilmahaaga, waana qofka ugu horreeya ee hubiya buugga!
Isku qor khadka tooska ah ee 'RevTrak' ee Dukaankayaga Shabakadda PTO .
Lacag bixintaadu waxay kaa caawinaysaa inaad bixiso xulashada Buugaagta Dhalashada sanad dugsiyeedka oo dhan. Deeqaha dheeraadka ah waxay gacan ka geystaan iibsashada deeqaha waxbarasho ee Dhalashada. Nagu soo biir ka qayb qaadashada maktabadayada oo ka caawi ilmahaaga inuu ka tago dhaxal waara oo muhiim ah.
Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo Ee Ku Saabsan Barnaamijka Buugaagta Dhalashada Minnewashta
Maxay Tahay Sababta Buugaagta Dhalashada?
Barnaamijka Buugga Dhalashada Minnewashta PTO waxaa la bilaabay Deyrtii 2013. Ujeeddadu waa in loogu dabaaldego dhalashada arday kasta hadiyad waarta oo akhris iyo in la gaaro ujeeddooyinka soo socda:
Ka tirtir farqiga u dhexeeya noocyada dhalashada "daweynta" ee la keenay fasallada.
Yaree soo-gaadhista xasaasiyadda cuntada
In kor loo qaado tirada iyo buugaagta kala duwan ee laga heli karo Dekedda.
Waalidiintu waxay ugu deeqaan $ 15 cunug kasta barnaamijka iyagoo adeegsanaya webstore-ka PTO. Inta lagu jiro bisha dhalashada ilmahaaga, ardayda kaqeybgalaysaa waxay doortaan buug laga soo ururiyay buugaagta Dhalashada gaarka ah ee Dekedda. Ardayga ayaa laga caawin doonaa sidii loogu baahdo helitaanka buug u dhigma dantooda isla markaana saxeexi doona kuna soo lifaaqi doona buug yar oo lagu calaamadeeyo maalinta gaarka ah dusha hore ee gudaha. Iyadoo lagu saleynayo caqliga macallinka, ardayda iyo / ama martidooda gaarka ah waxay rabi karaan inay u akhriyaan buugga, ama qaybo ka mid ah, fasalka inta lagu jiro waqtiga akhriska.
Goorma ayuu ilmahaygu ka xulanayaa buuga dhalashadiisa Xarunta Warbaahinta?
Waxa jiri doona “Saldhigga buugaagta dhalashada” oo laga furo 2x / bishii Dekedda dhexdeeda bilowga iyo bartamaha bisha. Macallimiintu waxay ka heli doonaan ogeysiis sanduuqooda boostada ka hor inta idaacaddu furan tahay iyagoo u sheegaya iyaga oo ogeysiinaya cidda fasalkooda loo diiwaangeliyay inay ka qaybgalaan maalinta dhalashada bishaas, iyo daaqadda maalinta / waqtiga gaarka ah ee ardayga loogu dirayo Dekedda. Haddii sababo jira awgood ardaygu aanu tagi karin rugta dhalashada buugaagta markay furan tahay, macallinkooda ayaa sii wadi doona in lagu wargeliyo saldhig kasta oo soo socda illaa laga helayo buugga Dhalashada.
Ma u baahanahay inaan sugo illaa dhalashada cunugayga si aan uga qoro Webstore-ka?
Maya, waad iska qori kartaa barnaamijka wakhti kasta inta lagu jiro sanad-dugsiyeedka. Ardaydu waxay guud ahaan dooran doonaan buugga dhalashadooda inta lagu jiro bisha dhalashadooda.
Kawaran haddii reerkeennu doortaan inaysan kaqaybqaadan?
Dhib ma leh, barnaamijku waa mid gebi ahaanba ikhtiyaari ah, macallimiintuna guud ahaan way aqoonsadaan dhalashada ardayga siyaabo kale fasalka dhexdiisa. Beddel ahaan, ardaydu waxay sidoo kale amaahan karaan buug ka socda maktabadda si ay ugu akhriyaan fasalkooda ama ugu deeqaan buug si tartiib ah loo isticmaalay fasalka macallinkooda.
Qoyskeena ma iibsan karaan buug si toos ah si ay ugu adeegsadaan barnaamijka?
Maya, Dekedda ma aqbali karto buugaag ka baxsan. Khubaradayada warbaahinta ku takhasustay waxay buugaag horey uga sii iibsadeen ilo waxbarasho oo ka hadlaya baahiyaha gaarka ah ee maktabada. Haddii aad hayso buug aad u malaynayso inuu waxtar u yeelan doono maktabadda Minnewashta, waxaad si xor ah ula xiriiri kartaa guddoomiyaha buugaagta dhalashada, Michelle Edstrom, codsigana waxaa lagu qiimeyn karaa iyadoo lala kaashanayo khubarada warbaahinta.
Cunto ma la keeni karaa dugsiga si loogu dabaaldego maalinta dhalashada?
Maya. Haddii waalid ama arday ay u keenaan cuntada iskuulka maalinta dhalashada ardayga, shaqaalaha xafiiska iyo macallimiintu waxay si naxariis leh uga codsan doonaan inay ku raaxaystaan cuntada guriga iyagoo sharraxaya barnaamijkeenna Buugga Dhalashada.
Goorma ayaa la xusaa dhalashada xagaaga / fasaxa?
Macallimiintu waxaa laga yaabaa inay go'aamiyaan waqtiga ugu wanaagsan ee loo dabbaaldego maalinta dhalashada ee soo degta maalmaha aan dugsiga jirin. Maalmaha dhalashada xagaaga ee ku hoos jira barnaamijka Buugaagta Dhalashada, ardaydu waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay doortaan buug ku saabsan sannad-guuradooda nus, dhammaadka Maajo, ama isla marka ay barnaamijku bilaabmaan bilowga sannad-dugsiyeedka. Foomka isdiiwaangelinta Buugaagta dhalashada, waalidiinta waxay yeelan doonaan awood ay ku muujiyaan dookhooda.
Maxaa dhacaya haddii ilmahaygu dhalashadiisa mar hore dhaaftay oo aanan isdiiwaangelin, miyaa goor dambe?
Maya. Weli waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo isticmaalaya isla nidaamka kor ku xusan. Markaad isqorto, macalinka ilmahaaga ayaa heli doona ogeysiis si loogu diro goobta xigta ee furan buugaagta dhalashada.
Ma jiraan deeqo waxbarasho?
Haa. Qoysaska kaqeybgalaya waxay ku darsan karaan lacag dheeri ah, wixii $ 5 kordhin ah, si loogu iibsado buugaagta dhalashada kuwa kale. Shaqaalaha sooshalka ee iskuulka ayaa aqoonsan doona ardayda ka faa'iideysan kara deeqsinimada dadka kale wuxuuna si toos ah ula xiriiri doonaa macluumaadkan shaqaalaha waxbarista.
Yaan la xiriiri karaa haddii aan su'aalo dheeraad ah ka qabo?
Fadlan la xiriir Guddoomiyaha Buugaagta Dhalashada ee PTO, Michelle Edstrom - michelle_edstrom@yahoo.com .